I-JUSTICE LEAGUE SNYDER SIKA IJOKER: 'SIHLALA KUMBUTHO' - IQHULA
Inkulungwane Yama-21 Ye-Foxdisney Ukudibana
Nokuba yayilukhetho lwe-meta okanye ukungaqondani kwe-meme, andiqinisekanga, kodwa uJoker wathi Sihlala kuluntu olukwitreyila kaZack Snyder's I-Justice League , kwaye ndisiva wonke umntu ekhwaza HAYI kwindlu yam. Imeme, eyiphi ngu uqhagamshele kwiJoker ngokwakhe , yayithandwa emva kwi-2018 kwaye ke ewe, ngokuqinisekileyo, masiyiphose kwi-trailer yeSnyder Cut!
Umbono kukuba iJoker sisikhalazo sokubuthwa kwabo bangakhathalelwanga luluntu-into edlale indima enkulu kwifilimu Joker kwaye wopha kule meme yeentlobo. Ke ukuyibona iphakama kwiSnyder Sika? Kuvakala ngathi kukuhamba kwemeta ngaphezulu kokuhamba kwemeta kwaye ndiqinisekile ukuba indophuke ngokupheleleyo.
Ekupheleni kwetreyila, uBatman ngokusisiseko uhlala kwindawo eyinqaba entlango kwaye uJoker uhleli emotweni kwaye (ngaphambi kokuba simbone) uthi, Sihlala kuluntu… apho imbeko sisikhumbuzo esikude, kwaye ngelixa isicatshulwa esihle , Sonke sinamathele kwindawo esihlala kuyo ngenxa yokuba kunjalo USnyder ubeke imeme apho.
UJared Leto Joker esithi siphila eluntwini yiyo yonke into endiphuphile ngayo https://t.co/PhcVpFJghb
-Ryan Broderick (@broderick) NgoFebruwari 14, 2021
Lonke uphuhliso lweZack Snyder's Justice League yayiyiminyaka nje prank ende ukubeka Sihlala kuluntu kwi-trailer.
-Carlos A. Morales (@CarlosAlonzoM) NgoFebruwari 14, 2021
Siphila kuluntu .... apho ndikwimbambano yokonyulwa kweGqirha eliBalaseleyo kwiZINTO EZINCINCI. pic.twitter.com/Jaksr7mbG5
-Mat Neglia (@NextBestPicture) NgoFebruwari 14, 2021
UTHI UTHI UTHI WENA UTHI
SIHLALA KULOLUNTU pic.twitter.com/gMBenz80ZA
-Ukucebisa yinxalenye ye-Elliot Alderson | Iintsuku ezingama-32 ~ ZSJL (@ZacktivAdvit) NgoFebruwari 14, 2021
Andizange ndicinge ukuba ndiyakuphila ndize ndibone mhla isiqhulo sisithi sihlala eluntwini. olu lusuku olubi ebomini bam https://t.co/HYxmm3GiJ5
- sayna. * ೃ (@OCEANGlRL) NgoFebruwari 14, 2021
- UCarrie Wittmer & # x1f47b; (@nqabamatshazi) NgoFebruwari 14, 2021
-Hannah Woodhead (@thethirdhan) NgoFebruwari 14, 2021
Usuku lukaValentine, 2021. SIHLALELA KULUNTU LUYAHAMBELA. Into ekufuneka iphilisile, andiqinisekanga ukuba yintoni.
-Scott Wampler ™ (@ScottWamplerBMD) NgoFebruwari 14, 2021
Zack eyalela i-jared leto kwiseti ye #ZackSnydersJusticeLeague :
ngoku mxelele ukuba sihlala phakathi koluntu pic.twitter.com/zwpt1eNoAx
I-Hadeed Butt (@mhadeedbutt) NgoFebruwari 14, 2021
Ngaba isithi abo babekhala kwaye becela iSnyder Cut, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, siphila kwingcinga yoluntu? Ngaba sisalathiso esiqhula kwimbali edibanisa nomlinganiswa? Ngaba kufanele ukuba siyifumane ihlekisa okanye ingaba yinto enzulu? NGABA UMNTU ANGACACISA NGOKUBA NDIZA KULAHLEKA.
Nceda, abenzi bamabhayisikobho behlabathi, ungaqali ukongeza ii-meme kwiimuvi zakho. Ndiyakucela. Andikwazi ukuyithatha.
Gugu Mbatha Eluhlaza
uzalwe emnandi izolo tv tropes
ishire ukuya kwimordor map kaGoogle
Ixabisa malini i-watson analytics
Umjelo uya emanzini uyaphuma
Iijellies tyler umdali